FA-010 agba aja aja-Full ahụ onye na-akpụ isi n'etiti apata ụkwụ ahụ/ fajas post operatorias
● Naanị ịsa aka
● Isi ihe: 88% naịlọn, 12% Elastane, Akpụkpọ anụ anyị na-eji akwa ọkwa dị elu, nke na-agbatị ma na-adịgide adịgide, nnukwu ahụ na-akpụzi maka mgbake mgbe ọmụmụ nwa, ọ na-enye nkwado na mkpakọ gị ab kwesịrị ịlaghachi na mbụ ya. udi.Biko lee SIZE CART anyị na foto 2 kama nke Amazon, họrọ uwe dabara adaba dịka nha okirikiri ukwu siri dị.
● Nhazi ZIPPER CROTCH: Zipper Crotch Maka Ọ dị mfe ịga ụlọ ịsa ahụ.Achọghị ịwepụ uwe ahụ dum.Ogologo etiti apata ụkwụ na-enyere aka ebughibu ụkwụ.Nhazi mepere emepe na-enye gị ohere iyi bra nke gị.Emebere ahụ anyị shaper na atọ n'ígwé n'ihu akụkụ, nye obi umeala mkpakọ iji jide afo na, ikesie gị midriff, belata úkwù ozugbo na-egosi gị eke usoro.
● BUTTOCK ONYE ONYE ONYE AKWỤKWỌ NKE HIP: Hip bụ naanị otu akwa akwa ma hapụ úkwù n'enweghị nchekasị ka ọ bulie ya.N'ime ogologo oge, ị ga-akpụzi Peach Buttock mara mma.E wezụga nke ahụ, ị ​​nwere ike iyi ya n'ụzọ dị mfe n'okpuru ụdị uwe ọ bụla (ụdị dabara adaba n'elu, uwe mwụda, jeans, uwe) maka uwe kwa ụbọchị iji mee ka uwe gị dị mma ma ee, ọ gaghị enwe ihe ngosi nke panty LINES!
● AKWỤKWỌ ỤWA ỤWA: Mkpa slimmer Panty n'akụkụ akụkụ ahụ zuru oke dabara adaba.Zere nkenke gburugburu crotch.Akwa na-agbanwe nke ukwuu na mgbanwe akwa udi uwe elu nke nwere rọba na ọkpụkpụ rọba abụọ n'úkwù na-egbochi ịkwatu ala.Mkpuchi zipa n'èzí nwere nko ime, dị mfe itinye ma wepụ ya.2 eriri ubu na-agbanwe agbanwe na nke nwere ike ịpụpụ iji hụ na ị nwere ike dabara na ya, na-enye gị usoro sexier dị nro ma nyere gị aka ịma mma na uwe / uwe!
● MUTLI-FUNCTIONAL ESWEAR: The slimming bodysuit na-emekwa ka ọ dị gịrịgịrị nwa afọ afọ na aka ịhụnanya, na-enyere gị aka ịdị gịrịgịrị.Mee ka ala gị sie ike ozugbo, mee ka úkwù gị dịkwuo ibu ma maa mma.GIT IDEAL maka ụmụ nwanyị ọ bụla hụrụ n'anya iche maka ọdịdị ahụ ha n'anya.Ndị nne ọhụrụ, ụbọchị ọmụmụ, Ụbọchị Nne, ekeresimesi, Ekele, Black Friday, Cyber ​​​​Monday.
Nke gara aga: FA-009 Black fajas-Post Surgery BBL Compression Uwe/bbl fajas post ịwa ahụ
Osote: FA-011 agba aja aja Fajas-ahụ siri ike nke na-akpụ isi n'etiti apata ụkwụ ahụ uwe akwa
FA-006 Black Fajas-Uwe mkpakọ ịwa ahụ...
FA-012 Beige Fajas-Mkpakọ ịwa ahụ n'ihu Gar...
FA-005 beige Fajas - akwa uwe n'úkwù slimming Gi ...